Ulihlobisa kanjani ibhayisikili ngombukiso? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Imihlobiso yebhayisikili yombukiso - isisombululo esisebenzayo
Imihlobiso yebhayisikili yombukiso - isisombululo esisebenzayo
Ulihlobisa kanjani ibhayisikili ngombukiso?
Thenga amabhaluni asontekile esitolo sendawo sokuphakelwa kwephathi futhi wenze ubuciko. Amabhaluni agcwele ngaphakathiibhayisikilifuthi unamathisele enganeni yakhoibhayisikiliisihlalo. Ama-balloon we-Twist angenziwa abe yigiya lekhanda elihlanyayo elingahlanganiswa nesigqoko sokuzivikela sengane yakho futhi sandise phezulu phezulu noma umsila ngemuva.
Manje kufanele wenze okwesibili ukuze ukwazi ukuhlobisa ibhayisikili lakho kanjena noma ungathanda ukwenza ibhayisikili lami kuze kube manje, kodwa kungakulimaza amasondo akho. Cha ngeke kubenjalo manje ake sihlobise izigqoko zethu Kulungile, ngizobeka ibhayisikili lami manje, vele ukhethe elilodwa bese ic h ukhethe ipayipi yokuhlanza okungukuthi lena yinhle yegolide khetha eyodwa bese ukhetha ipompom engaba lolo sayizi ngizoba ukuthi lungaba yilolo sayizi noma kanjani ngoluncane oluncane kakhulu noma manje lolu hlangothi ngizoluthatha ngithathe opopayi bakho bese ngisebenzisa ibigone bese uluthatha uzolugoqa uzolusonga uyihlanekezele phansi kanjena, ngakho-ke awukwazi ukubona isicoci sepayipi ngakho-ke manje sizosebenzisa ukubukeka kwakho kweSokay ngizomthatha isigqoko sokuzivikela futhi ngizokhetha ukuthi imuphi umgodi ofuna ukushibilika kuwo, ake sithi ngifuna ukuyislayida ngalena, ngizoyiphenula, awuyifuni le pokey bese uthwebula amakhanda akho bese udabula elandelayo bese uyivula ukuze ukwazi ukuyilungisa i-twist? lokho kungahle kwenziwe njengefindo elincane, qinisa ifindo kaningi, mhlawumbe ngandlela thize kanjalo, ngakho-ke kanjalo nje, ngakho-ke asihambeni lapho eseqedile, sizoqala iteyipu yethu yesibili, njengoba ubona, sinabamaki uthatha okuphezulu uzoyibamba futhi uzosonga bese ugoqa isihlanza sakho samapayipi esibayeni kodwa awufuni ukusonga yonke into onayo bese uyayisusa ngokucophelela futhi une-pipe cleaner ne into eyindida, ngakho-ke njengoba okwami ​​kungakude ngokwanele, ngizozitholela omunye umshini wokuhlanza ipayipi elimhlophe bese ngilinamathisela kule ndawo yokuhlanza ipayipi ukuyenza ibe yinde kancane, awuzame, kulungile ukuze ubone U-Emily wenza eyakhe futhi wayinamathisela ngemuva lapho enamathisela khona i-bobble yakhe lapha futhi senza lemisebenzi yezandla epholile impela, ngiyethemba uyijabulele le ndatshana emayelana nomkhosi we-salmon futhi ngiyethemba ukuthi uyithokozele futhi ilapha esigqokweni sika-emily futhi ngikufisela injabulo enkulu yokubungaza umkhosi we-salmon nathi ngokwamanani njengombukiso wangempela, ngiyabonga y noma, ngethemba ukuthi uzosindisa iqembu lakho
Ngingalihlobisa kanjani ibhayisikili lami?
Hlobisa i-izibambo, izibambo zokubamba, ngishoeyakhoizipikha ezinezitika.
Uma ungawuthandi umbala weibhayisikili lakho, ungamboza uzimele ngokuphelele ngezitikha ezigqagqene.
Uma kunjaloukufan wamaphetheni, ungabeka izitika ezindaweni ezichazwe kusengaphambili kulo lonke uhlaka lwe-ibhayisikili lakhoukudala amaphethini.
Kudala ngifuna ukufafaza ibhayisikili lami, kuyindlela enhle yokwenza kube ngokwakho futhi ngiyinike impilo entsha, kepha bengilokhu ngesaba kancane, kuwumsebenzi omuhle ukupenda ibhayisikili kodwa ngiyeke ukukhiya nina bafakile okunye ukukhushulwa okuhle emabhayisikili owafuthile futhi nina bantu nikhuthazeke kakhulu ngakho ngizozama, angikaze ngikwenze lokhu futhi ngidinga ukuholwa ngobuchwepheshe nokuthi ngubani ongcono kuno-Ali noBex abavela kuFatta Creations, manje mhlawumbe nina sengibalandele ku-Instagram, nakanjani ingenye yama-akhawunti wami we-Instagram engiwathandayo, ngakho-ke masihlangane nabo kwi-workshop yabo futhi ngicabanga ukuthi ngisendaweni efanele, ubone ukuthi zinhle kangakanani, ngiyabonga ngokusivumela wamukelekile kakhulu Ngicabanga ukuthi kungcono sikubonise indawo futhi umhlangano wokusebenzela ka-bex uyigugu lamafreyimu wesiko obabazekayo njengoba wazi ukuthi ngenza upende wokufafaza nge-DIY kwelinye lamabhayisikili wami wakudala futhi-ke kufanele ngikwenze ngokwami ​​futhi i-diyi ngeke unanoma yimaphi amagajethi amahle ngiyazi ukuthi angenza kanjani mhlawumbe libe lihle njengebhayisikili lakho yeah Impela luhlaka luni ake sithole eyodwa Bheka ukuthi unani ngakho yibhayisikili leli engifuna ukuliguqula, ngiqala kuphi ngicabanga ukuthi kufanele ngilidonse? Konke phansi, susa upende, uma unohlaka lwensimbi noma lwe-aluminium kanjena futhi lungagqokile, thola i-emitter yendawo, uyazi ukuthi basebenzisa isihlabathi esihle ukuze bangalimazi i-aluminium ngokweqile, kepha kuyenzeka ngokoqobo ikunika ukhiye ophelele kupende. Hlala ubukele futhi ungithembe, uma uke wachitha usuku lonke ukhumula upende ebhayisekilini, izindleko zisuka ku- £ 30 ziye ku- £ 35 ukuze wenze lo msebenzi obukeka ungaphekiwe ususe i-Get factory kuyindleko uzojabula kakhulu uyisebenzise. Kunezinto ezimbalwa okudingeka sizenze ukukwenza, hawu, uma ushaya okuthile upende uzoxebuka ngokulinganayo, kepha uma eyodwa Lesi sitika silapha, esinye sezitikha ezinhle, uma umuthi ungahambi ngokusebenzisa kahle kakhulu, ithatha amandla ezinhlayiya ezinhle ngakho-ke wenzani ngayo? izongena ekugcineni, kepha uzoba nommango lapha le ngxenye ye-aluminium enamathela kuyo.
Ngakho-ke sizosusa ngasinye salezo zinamathelisi ngaphambi kokuba sizifinyelele ku-blaster, futhi uzoba nesiphetho esibushelelezi lapho usithola. Kupholile futhi ngakho njengoba izimfoloko zami ziyikhabhoni angikwazi ukuzenza zikhanye ngakho kufanele ngizigaye. Ngokuvamile u-Ali wayezowususa phansi kukhabhoni engenalutho, kodwa kulo msebenzi kuzolunga ukuthatha isicwebezelisi namalogo ukuze nje usheleleze bese sihamba phezu kwawo ngo-A320 ngaphambi kokuthi siqale ngemuva kokulungiselela Senze uhlaka esilungele ukuqhuma silapha enkampanini yePenfold metallization, lapho ngizoba khona ozimele bami ababhidlizwe ngomdwebo, ngakho-ke ake sihambe siyofuna iJed bese sibona ukuthi i-sandblasting imayelana nani, nalu uhlaka lwami oluhle, ifreyimu ibilokhu kuqhume ngokuphelele nokuthi ngithathe imizuzu engaba ngu-15 futhi bengcono kakhulu kunalokho ebengingakwenza mina ngakho ngijabule kakhulu ukuthi ngikwenzile futhi manje sekuyisikhathi sengxenye yobumnandi yehlisa umoya konke sekumi ngomumo manje sekuyisikhathi sombala onzima ukukhetha lokho engikwaziyo ukuthi ngifuna okuthile okuthe ukwehluka kancane okucwebezelayo mhlawumbe kulungile nginemibala embalwa ngaphandle bheka ukuthi ucabangani ezinye v kulolo hlobo lwezinguquko futhi zinhle kakhulu.
Kungenzeka yini nge-aerosol, nobabili ningakwenza lokhu nge-aerosol, okungeyona inkinga, khipha laba bobabili, yebo, kuze kufike kulezo zinqumo ezimbili ezinzima ngakho-ke lolu ushintsho lwemibala emibili, ngakho-ke abakhiqizi abaningi bamabhayisikili manje basebenzisa lowo mbala futhi kunjalo? ushintsho kusuka kokuluhlaza okwesibhakabhaka kuya kokunsomi, okunemibala emihlanu, ngakho-ke lokhu kuyamangalisa ngokwengeziwe kunalokhu yebo ngicabanga ukuthi ngizoya kulokhu ngicabanga ukuthi ngizoya kulokhu ngikuthanda kakhulu lokhu, ngakho-ke ngakhetha umbala wami, kodwa engikudingayo ukwenza lokhu cishe ngophawu lwamakhilogremu ayi-100 ungathola konke okudingayo, ngakho-ke into yokuqala oyidingayo isisekelo sokuqala ongasithola, ungathola noma yini i-aerosolized, bese kuthi ngalolo pende udinga ukupenda ibhayisikili elimnyama kuqala ukuze umbala uncike engutsheni enhle emnyama eyisisekelo ngakho-ke unethini elimnyama bese lowo mbala uqobo uluhlaza weChromacoat odlula ijazi elimnyama bese ekunika lowo mphumela, bese ngincoma eyodwa 2k ijazi elicacile , ngakho-ke i-varnish, kepha leyo i-2k, ngakho-ke uhlanganisa amakhemikhali amabili ahlukene ndawonye, ​​i-epoxy varnish Okuwukuphela kwento ene-varnish engu-2k ukuthi inezithako ezithile ezimbi Ngakho-ke kufanele ugqoke imaski, okungenani amalahle amahle imaski, futhi ukwenze ngaphandle ubungakwenza egalaji, kepha ngaphandle kokuthi ube nomlandeli omuhle ngempela lokho ucks the fumes out it is not worth it to the Right ones Linda usuku lwenze ngaphandle endaweni enomoya ongcono, ungathola u-1k wepende izingozi zezempilo zingaphansi kakhulu ngakho akukho okumele ukhathazeke ngakho, kepha ngokuphila isikhathi eside, u-2k indlela ozohamba ngayo ngenkathi ulapha sizokukhombisa ukuthi ungapenda kanjani futhi izokunikeza umbono wokuthi yini ongayilindela lapho usebenzisa ama-aerosols. Ngeke kufane ncamashi, kepha kukunikeza umbono omuhle, yebo lokho kuzoba kuhle ngiyacela, angikaze ngifafaze noma yini laphaya futhi engake ngayibona ngaphambili, lokhu kuyathakazelisa ukusivimbela ukuthi sithole izindawo zokuqala esizenzayo 'Angifuni ukuyimboza sifuna ukuyifihla ngakho-ke ngine-masking tape lapha futhi ngizofaka ishubhu esihlalweni kanye kubakaki ongezansi kepha sinezindawo ezithile kubakaki abangaphansi kepha ungakufihla lokho uma ungenayo ama-bungs ngakho-ke uma kukhulunywa ngalokho kudweba ifreyimu yakho, nokuyilokho ofuna ukukwenza ngesibhamu kanye nesifutho lapho usenza khona kusengqondweni yakho ukuthi yiziphi izingxenye ozozipenda kuqala futhi ezizophuma njalo ekugcineni ngaphandle kokuthi ube nokulawula kahle inhlamvu okunzima kakhulu nge-aerosol can ngakho-ke ngiphakamisa ukuthi ufike ekugcineni ekugcineni akunjalo? Thola upende omncane ongaholela ku-Arunas. Sisebenza nge-2k primer namuhla ngingahle ngiphakamise ukuthi ugqoke lesi mask.
Inokunikezwa umoya futhi izokulethela umoya omusha esikhundleni sokuphefumula emsini bese ufaka lezo zinto emaphashini akho. I-Snot akuyona into enhle kakhulu, ngiqale ukuprakthiza ephepheni elithile ukuze ngizizwele, manje sekuyisikhathi sangempela ngizozama ukubamba imfoloko yami ngakho-ke yibhayisikili lami leli, lilungele futhi lilungele isigaba esilandelayo, ngiyabonga kakhulu ngokungisiza namuhla nangokuyisebenzisa ku-workshop yakho enhle wamukelekile kakhulu, yiba namathiphu amaningi, yiba nesineke yebo impela ukubekezela kuyinto enkulu futhi eyenziwe kahle, yebo muhle impela leyo ethembisa kakhulu umbala ngakho yebo ngikufisela inhlanhla ngiyabonga kakhulu manje sengisele kumadivayisi ami futhi ngizoqala ngosanta omanzi wohlaka ngo-600 grit sandpaper amanzi afudumele anensipho ngizovele ngihlele lonke uhlaka nemfoloko ukuqeda noma yikuphi ukungapheleli, kodwa kuhle kakhulu iphelele noma kunjalo, uma ungafuni ukwenza noma yini engasile vele ugxile ekutholeni isiphetho esibushelelezi futhi lapho kukhona amaqhubu amancane avela ku-primer eyomile, jula kulokhu, ngakho-ke ngafaka uhlaka ngokuphelele futhi njengoba ubona lapho bekusele kancane upende osele ohlakeni ngakho-ke sidinga i-wi pe that off so okokuqala ngizoba nje into ethatha amanzi acwebile nendwangu ngiyisule yonke bese ngizosula ngale primer ukuze ngiyithole ihlanzekile ngokwengeziwe bese kuyisikhathi sesisekelo uCoatali anginikeze nalezi stickers futhi lezi zinamathelisi zisentanyeni yekhanda kubakaki abaphansi isihlalo sokuhlala sihamba ku-caliper caliper nezinye ezinye ezimfoloko ukuze ziye noma kuphi angifuni nje upende ngakho-ke zonke izitika zivuliwe futhi zilungele umnyama base coat futhi uma usebenzisa izifutho ezinjena kubaluleke kakhulu ukugqoka imaski ngakho-ke nginesifihla-mkhuba esithandeka kakhulu lapha, um, kepha uma sengikufake imaski ngeke ikwazi ukuzwa i-Hearmeum ngakho-ke ngizovele ngigcine Ngiyafisa ngibe nenhlanhla futhi ngethemba lokuthi angizukuyilimaza ngakho-ke i-basecoat isiqedile ngicabanga ukuthi ngikwazile ukuyikhohlwa kakhulu kuyo yonke indawo ifreyimu futhi manje siyi-j ngizoyingenisa ngaphakathi ngoba kubanda kahle ngaphandle , ifudumele kancane ngakho iyoma, ngakho-ke ngemuva kwengubo yokuqala emnyama izolo ngangenza ijazi lesibili ngabe sengiyingenisa ide kuya efudumele nangaphezulu Yiyeke yomile ubusuku obubodwa yavela yaba yinhle ngijabule ngakho namhlanje ngizosula ngopende opre, ngiwusule bese ngizonamathela kule stencil ebhala isibindi indalo ngomusa yenze ukuthi ngithole amadragoni e-welsh nama-myinitials ami welsh ngizonamathisela amabili kwimfoloko bese kuthi amabili kubhubhu yesihlalo mhlawumbe ama-initials ami kushubhu phansi angiqiniseki ngokuphelele ukuthi angizange ngakhe ingqondo okwamanje kodwa ngethemba lokuthi kuhle ngomzuzu ngakho-ke ake sifike kulokho, izitika zami zikhona, ngisanda kuzithenga phambi kwedokodo lami elincane lokupenda lika-DIY futhi manje sekuyisikhathi sokukhanga okuyinhloko imibala inovalo oluhle kodwa sizobona, awu nkosi yami uyibheke yinhle oh nkosi yami ngiyayithanda kepha lona umbala kanye ebengiwufuna ngakho ngafaka amajazi amabili kapende kuwo umsele ongasenarheni bese ngiyeka u-r cishe imizuzu engama-20 futhi manje ubukeka umuhle ngengxenye ekhohlisayo kakhulu ukuzama ukususa izitika ngaphandle kokuqhekeka noma ukulimaza izitika zohlaka sezihambile kepha upende womile futhi yisikhathi f noma manje ibhantshi elicacile futhi empeleni le yingxenye enzima kunazo zonke, kusho umali, ngakho-ke ngiyethemba angizukuphazamisa lokho, kodwa ngijabule kakhulu ngakho, kubukeka kukuhle kakhulu kufanele kuthi kubukeka kubukeka kukuhle okumnandi, lokhu amajazi amathathu enziwe, ngizomisa ngaphakathi cishe amahora angama-24 manje futhi nakhu kuhlaba umxhwele, kufanele ngizitshele ekuqaleni kwalo msebenzi wepende owenziwe ngokwezifiso, angikaze ngicabange ukuthi ngingahamba nanoma yini enjengalena izosala ngemuva kodwa ngiyabonga kakhulu ku-bex no-ali ngokuxoxa nami kube nezingcingo ngenkathi ngisazipenda mina nje ukubheka ukuthi ngiyitholile kahle kepha kuthathe cishe izinsuku ezintathu kepha lokho bekugcwele izinsuku ezintathu zomsebenzi, bekukhona ukulinda okuningi ukuthi upende womile futhi kuhlanganiswe wonke ama-aerosols angibiza cishe ngama- £ 80 ngakho-ke awabizi kakhulu uma unefreyimu endala elele nxazonke ngingancoma ukuthi umuntu enze upende omncane ongokwezifiso kuwo ngoba kuyinto enhle kakhulu uma ufuna amanye amathiphu avela kochwepheshe uqobo hhayi kulowo oyintandokazi bese uya ku-t o Bex no A. lis Youtubechannel njengebhayisikili lami, ngicela unikeze le ndatshana isithupha esikhulu ungazise ukuthi ucabangani ngayo esigabeni sokuphawula ngezansi
Ngilihlobisa kanjani ibhayisikili lami ngomhlaka 4 kuJulayi?
HlobisaIngane YakhoIbhayisikiliLokhuJulayi 4nalezi Zeluleko
Khombisa uhlangothi lwakho lobuzwe kuIbhayisikili.
Kugcine Kulula: Vele ungeze Abasakazi.
Ungasinaki Isigqoko Sokuzivikela.
Hola izingane, isitayela seCargo.
Sebenzisa ama-Streamers ngezindlela ezingalindelekile.
Yifulegi Elidala Elikhulu.
Beka Umnsalo Kuwo.
Ngingalihlobisa kanjani ibhayisikili lami ngosuku lokuzalwa?
9 KuyathandekaImibono Yokuhlobisa Izinsuku Zokuzalwa Zebhayisikili
Faka umfutho wombala nenjabulo ngala masondo ephepha. Bazokhumbuza izivakashi zakho ngamasondo nezipikha! Faka i-ibhayisikiliuphawu lokupaka ukukhombisa abagibeli bakho bamabhayisikili (noma amabhayisikili amathathu) lapho ukupaka abagibeli babo. Faka okunye okubhangqiwe kweTour de France ukumakaibhayisikiliimizila.
Kulesi sihloko sizokukhombisa izinyathelo ezilula esizisebenzisayo ukwakha umhlobiso obabazekayo wamabhaluni ngaphandle kwe-helium yophahla. Uzodinga okungenani imibala emithathu yamabhaluni ehambisanayo. Siye ngamabhaluni ajwayelekile angama-intshi ama-intshi ayi-12 ngombala omnyama ophuzi nombala ophephuli indwangu yokufihla ibhaluni kule mbono yeCore yamabhaluni amaphuzu sidinga amaribhoni ambalwa ukuphakama kophahla lwakho futhi sidinga isikele ukusika iribhoni kubude obufunayo .
Ekugcineni, uzodinga ibhaluni inflator ukuze upompe wonke amabhaluni akho. Manje ake siqaleUdinga okungenani imibala emithathu yamahhala ebhaluni esikhethe yona ephuzi nemibala emibili ephephuli, owodwa omnyama nokukhanya okulodwa, ungazizwa ukhululekile ukusebenzisa amanye amabhaluni wokuhlobisa njenge-confetti noma i-Add polka dot. Sebenzisa isikele sakho ukusika amaribhoni ubude obufunayo Intambo ilenga cishe amamitha amane ngaphezulu kwephahla uphahla lwamanqina amane noma ayisishiyagalolunye Sisebenzise amamitha amane nohhafu weteyipu ibhaluni ngalinye ukuthola ithuluzi elifanele nokukala ubude besilinganiso sakho Ikhava bese khipha izinyawo ezine namasentimitha ayisithupha.
Ungafaka amabhaluni akho kuze kufike emahoreni angama-48 ngaphambi komhlobiso wangempela. Sishiye lawa mabhaluni cishe amasonto amabili futhi ambalwa kuphela kuwo anciphise okubi okuyinhloko ukuthi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa balahlekelwe ukukhanya kwabo okusha okufuthwe i-matte powder illahwe basebenzise isitulo esincane ukufinyelela ophahleni lwethu oluyizinyawo eziyi-9.
Ungadinga isitebhisi sokungena ophahleni oluphakeme. Ukusuka lapho amabhaluni abekwa nje ophahleni ngephethini oyifunayo esizame kaningi ngangokunokwenzeka ukuze singabi nombala ofanayo wamabhaluni eduze, kepha sawathola kanjani amabhaluni entanta ngaphandle kwe-helium? Sisebenzise isithako sethu semfihlo iBhaluni Blue Dots, sithathe ichashazi elilodwa noma amabili weglue emgqeni bese unamathela ebhaluni ngalinye. Amachashazi amabili noma ngaphezulu weglu agcina amabhaluni asindayo anamathiselwe ophahleni abese efinyelela phezulu bese unamathisela ibhaluni lakho ophahleni ngendlela elula yokuthi lokhu kunikeza umbono wokuthi amabhaluni akho agcwele i-helium futhi antanta phezulu athinta uphahla, gcina amabhaluni akho enamathele ophahleni ngaphambi kokwenza amalungiselelo akho, kunendwangu emanzi yokususa noma yiziphi izinhlayiya zothuli.
Ake ngivimbele ukunamathela kumachashazi e-glue ekulahlekelweni yiwo ngemuva kokuqinisekisa ukuthi indawo ihlanzekile futhi yomile ifike ophahleni amachashazi e-glue asebenza kahle kakhulu ezindaweni ezibushelelezi futhi izindawo ezimangele zingase zinganikeli indawo eyanele yokunamathela ngempumelelo futhi ekugcineni thina engeza ibhaluni lethu lokugcina, bese ubona ukuhleleka okuhle kwamabhaluni angenantambo e-helium enkazimulweni yawo ebabazekayo ngakho-ke, abantu babona indlela ephelele yokubhala ku-webhusayithi yethu-ibhaluni blowoutcalm yesinyathelo-nge- imikhombandlela yesinyathelo ukuthola izinketho zemibala ethe xaxa, imibono yokuhlelwa kanye nezixhumanisi zensiza ngayinye esiyisebenzisile ukuze ukwazi ukuzakhela owakho umhlobiso webhaluni entantayo, nokunye okuningi. Sinezinye izindatshana ezinhle zokuthi ungawaqamba kanjani amabhaluni wamahhala we-helium esiteshini sethu sokufundisa uma uthanda le ndatshana ye-Found ilusizo futhi ufuna ukuthi abanye bayibone, sicela ushaye inkinobho efana naleyo bese ubhalisela esiteshini sethu ukubona imibono yokuhlobisa ibhaluni engajwayelekile
Uyini umyalezo ophakathi nombukiso wamabhayisikili?
Uyini umyalezo ophakathilendaba? Kubaluleke kakhulu ukuzijabulisa kunokuwina. Hlola njalo imibono yakho ngaphambi kokuyaba. Ukucela usizo akuyona into onamahloni ngayo.
Ubeka kanjani ama-streamer kuma-spokes spokes?
Songa ukuphela kwe-crepeisakazangaphezulu kweyodwa ye-okhulumelaesondweni langaphambili, bese usebenzisa isiqeshana seteyipu ukusigcinaindawo. Okulandelayo, faka iisakazangokusebenzisa i-okhulumela, ukugoqa nokuthepha lapho uya khona ukuze uyiqinise ngokumelene ne-okhulumelangangokunokwenzeka.27 2016.
Ngingazifaka kanjani izinsalela ezibambo zami zebhayisikili?
Kulula! Vele unciphise isiqeshana sensimbi siphela ndawonye besefakaukuphela okukodwa ngesikhathi emgodini wakhoisibambo sebambo. Lapho sekufakwe yomibili imikhawulo yesiqeshana, cindezela ubude besiqeshana sensimbi kuze kube yilapho ingxenye eyisiyingi isithintabambaumgodi. Ngokufanelekile, ufuna ukuthi 'intamo' yesiqeshana ilingane kahle kubambaumgodi.
okufanele ubheke lapho uthenga ibhayisikili elisetshenzisiwe
Yini inhloso yamachashazi?
Namuhla, i-intshakazaisetshenziselwa iziqu nakweminye imikhosi kokubili ukwahlukanisa nokuhlanganisaizinhloso. Ukuthweswa iziquintshakazaokunamathiselwe ebhodini lodaka lesikole noma lekolishi, kumelela okungokwesigaba esithile esesikuqedileimigomo.
Zenzelwe ziphi izimvubu ku-Harleys?
I-isiswebhuingadedelwa ngokushesha futhi isetshenziswe 'uma kwenzeka kuphuthuma' ukujikijela noma yini ebangela usongo kumshayeli webhayisikili, yingakho igama elithi 'Get BackIsiswebhu'.Iziswebhuukuheha ukunakwa nokusiza ekubambeni iso labanye abashayeli. Namuhlaimvubuasetshenziselwa izizathu zokuhlekisa, kukhethwe imibala ukufanisa amabhayisikili.10 2010.
Uyini umehluko phakathi kwentshakaza nomphetho?
Yini i-umehluko phakathi komphethofuthiintshakaza? TOintshakazayinqwaba emise okwebhola yemicu elengisiwe noma evulekile elengayongengentambo ekugcineni lapho iintshakazailenga. Ungaba futhiumphetho umphetho, okungumngcele wokuhlobisa ngokulengaintshakazaizakhi (bheka ngezansi).
Ungalihlobisa kanjani ibhayisikili lakho ngoSuku Lokuzimela?
I-Patriotic Scooter kanye ne-Bike Decorations - Hlobisa isikuta sakho ngombala obomvu, omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka wosuku lweNkululeko. I-Star-spangled Ride - Hlobisa ibhayisikili lakho ngezinkanyezi ngokulandela le miyalo. Amabhayisikili Angokwezifiso: Ukwenza Ibhayisikili Lakho Ngendlela Yakho - Funda ngezindlela zokwenza ibhayisikili lakho libe ngelakho.
Iyiphi indlela engcono yokuhlobisa ibhayisikili?
Izingane zingazenzela ubuntu bazo ngokuhlobisa amabhayisikili azo ngokuthanda kwazo. Ukukhuluma iqiniso, yonke ingane ifuna ukuthi ibhayisikili layo lihluke futhi kunezindlela eziningi ezingabizi kakhulu ezingakufeza ngazo lokhu. Enye indlela ukwenza ukusakaza ngamabhayisikili kusuka ezikhwameni zepulasitiki ezinemibala ehlukene.
Ungasihlobisa kanjani isibambo sebhayisikili sezingane?
Manje phinda utshani ngesigamu bese uthayipha i-tape ndawonye ekugcineni. Qhubeka nokusonga utshani ku-1/2 bese uqopha ndawonye ekugcineni, njengoba kuboniswe esithombeni # 3. Ungahle uthande ukuthola i-tape tape emibalabala emhlophe, ebomvu, noma eluhlaza okwesibhakabhaka bese uthayipha kahle utshani kwisibambo izobukeka yinhle uma wenza njalo. Kujabulele!